※Interview※ ရှင်သန်ခြင်း အနုပညာ_ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ရင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုက အရေးကြီးဆုံး！ဒီလိုလေးတွေ ပြင်ဆင်မယ် | Working Friends
※Interview※ ရှင်သန်ခြင်း အနုပညာ_ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ရင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုက အရေးကြီးဆုံး！ဒီလိုလေးတွေ ပြင်ဆင်မယ်
2017年12月25日 2018年3月2日 EM
ဂျပန်မှာ စွန့်စွန့်စားစား အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသူ၊တိုင်းရင်းသားများ၏ ရှင်သန်ခြင်း အနုပညာ
ဒီတစ်ခေါက်ရဲ့ ရှင်သန်ခြင်းအနုပညာ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ကူညီတင်ဆက်ပေးထားတာကတော့ ဂျပန်မှာ ၄နှစ်ကြာ နေထိုင်နေတဲ့ မခင်မြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ် ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပြီး၊ ယခင်၃နှစ်တာကာလကတော့ တိုကျိုက ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းတက်ရောက်ပြီး၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့်ဟိုတယ်လုပ်ငန်း ကောလိပ်မှာ ၂နှစ်ခန့်ပညာသင်ကြားခဲ့သူပါ။
ဂျပန်က လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအပြင် ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့အချိန်ရဲ့ ဘဝကိုလည်း သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်မှာ လေ့လာရသမျှကို ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီထောင်နိုင်တဲ့အထိ အသုံးချသွားမယ့် သူမရဲ့ရှင်သန်ခြင်း အနုပညာ မှတ်တမ်း
ဂျပန်စရောက်တဲ့အခါ ဆက်ဆံရေးပိုင်း ကောင်းမွန်အောင် ပြုမူနေထိုင်တယ်
WF : ဂျပန်ကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့လဲ။
ခင်: ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကတော့ အစပိုင်းမှာ ပင်ပန်းတယ်။ အသားမကျဘူး။ ကျောင်းလည်းတက်ရတယ် အလုပ်လည်းလုပ်ရတော့ ကိုယ်ပိုင်အချိန် မရှိသလောက်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ သူငယ်ချင်းတွေလည်းများလာတော့ ပျော်လာတယ်။ ကိုယ်ကရောက်တာ မကြာသေးခင်တုန်းက ဘေးလူတွေလုပ်ပုံကို လိုက်ကြည့်တယ်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စကားလှမ်းပြောတယ်။ စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ နှုတ်ဆက်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ပုံရိပ်က တက်လာတာပေါ့နော်။ အမြဲပျော်ပျော်နေတော့ ဂျပန်တွေနဲ့ပြောဆိုရာမှာလည်း ၊ တခြားနိုင်ငံသားတွေနှင့် ပြောရာမှာလည်း အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။
အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကနေ ကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုတွေ၊လူမူဆက်ဆံရေးပိုင်း အရမ်းအထောက်အကူပြုတယ်။
ကိုယ်ကိုတိုင်ကလည်း စကားပြောရတာကြိုက်တယ်လေ။ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။
နောက်တစ်ခု ပညာရလိုက်တာတော့ ရှိတယ်။ အဲ့တာက အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်ရင်းနဲ့ တစ်ခါတုန်းကတော့ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ၂ရက်ပဲ ဝင်တဲ့ အလုပ်ပါ။ စစပိုင်းဆိုတော့ နားမလည်တာအများကြီးပဲ။ ဂျပန်တွေကလည်း တိကျတယ်။ ပြောစရာရှိ ပြောတာပဲ။သူ့က ဘာလို့ကိုယ့်ကို အဲ့လိုပြောတာလဲ။ ငါလည်း ကြိုးစားနေတာပဲလေ ဆိုပြီး ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုကိုယ် ဘာလိုနေလည်းဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ပြန်သုံးသပ်တယ်။ ကိုယ်လည်း ပြင်စရာရှိတာ ပြင်ရမယ်။
အဲ့မှာ ပညာရလိုက်တာက တစ်ခုခုဆို စိတ်အရမ်းမထိခိုက်အောင် တွေးခေါ်နေထိုင်ဖို့ပဲ။ အားမလျော့ဖို့ဘဲ။ စိတ်ထဲမထားဘဲ ရှေ့ဆက်ဖို့ပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့် လူဆိုတော့လည်း စိတ်ထဲထားမိတာတွေတော့ ရှိတာပေါ့။ စိတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိနေဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တယ်။စိတ်ပျော့နေရင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ပျော်ပျော်နေတယ်။ မိသားစု၊သူငယ်ချင်းတွေနှင့် အမြဲအဆက်အသွယ်လုပ်တယ်။
အခက်အခဲတွေရှိရင် ရင်ဖွင့်တယ်။တိုင်ပင်တယ်။ဆွေးနွေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။
လူမူဆက်ဆံရေးကောင်းရင် အဆင်ပြေတယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။
ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ရာကနေ အခွင့်အရေးလက်လွတ်မခံဘဲ ဂျပန်ထိရောက်အောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူမ
WF : ဂျပန်လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရင်းလေး ပြောပြပေးပါ။
ခင် : အမှန်အတိုင်းအပြောရရင် ဂျပန်မှ ဂျပန်သွားရမယ်ဆိုပြီး ရူးသွပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အနာဂတ်က ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာဆိုတော့လည်း တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်ကတည်းက အမျိုးမျိုးစဉ်းစားတာပေါ့။တက္ကသိုလ်မှာက ဂျပန်ဘာသာမေဂျာယူထားတာပေါ့နော်။ ဂျပန်ဘာသာအပြင် တရုတ်ကျောင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ LCCI၊computer ​တွေလည်း လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းပြီးရင် စဉ်းစားထားတာက ပြည်ပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ပညာဆက်သင်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းကို ဆက်လက် ပြုပြင်မယ်ပေါ့။ ကျောင်းပြီးသွားတော့ စဉ်းစားလိုက်တာက ဂျပန်စာကို ဘွဲ့ရတဲ့အထိ သင်ယူပြီးပြီ။ ဂျပန်မှာ ဆက်လက်ပညာသင်ဖို့လည်း ဂျပန်စာ၊ယဉ်ကျေးမှုပိုင်း သိနေတော့ မခက်ခဲလောက်ဘူးပေါ့။ အတွေ့အကြုံပိုင်း၊ဗဟုသုတပိုင်း လိုချင်ခဲ့တာပါ။ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားတော့ မရှိခဲ့ဘူး။ငယ်ရွယ်တုန်းမှာ တက်နိုင်သလောက် ပညာစုချင်တယ်ပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ဂျပန်ရောက်လာခဲ့တာပါ။
ဂျပန်ရောက်ရှိတာ ၂၀၁၃ကဆိုတော့ မကြာခင် ၅နှစ်ထဲပါ။ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းကျောင်းကိုပဲ အရင်တက်ရောက်ပညာသင်ပါတယ်။ကျွန်မတော့ ဂျပန်ကို ရွေးခဲ့တာ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုလို့ပဲထင်တယ်။ တော်တော်များများ ပညာရတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ပြောတယ်။ ဂျပန်စာနှင့် ကျောင်းပြီးတာကို ဂျပန်မှာ စကားသင်တန်းကျောင်းဆက်တက်တော့ နှမျှောစရာကြီးတဲ့။ တိုက်ရိုက်တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်ချိတ်လည်း ရတာပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က ဂျပန်လူနေမှုပိုင်း နားမလည်တော့ အရင်ဆုံး ကျင့်သားရအောင်နဲ့ သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေလို့ရအောင် အချိန်ယူလိုက်တာပါ။
တစ်ယောက်တည်းလာခဲ့ရတဲ့ အချိန်တုန်းကတော့ တွေဝေတယ်။ ကြောက်တယ်။
တကယ့်ဂျပန်ရဲ့ နေထိုင်မှုအပိုင်းက ဘယ်လိုလဲ သတင်းအချက်အလက်ဘာမှ မသိဘူးလေ။
ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်း( ဂျပန်မှာ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေ ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတော့ ကြောက်မိတာပဲ)
ဂျပန်အစားအစာ (အသားစိမ်းငါးစိမ်း၊ရေညှိတွေ) စားနိုင်ပါ့လား။
ကျောင်းတက်ရမှာဆိုတော့ စားရိတ်က အဆင်ပြေပါ့မလား။
လုပ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုပြီးစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ အမျိုးမျိုးပေါ့။
အဓိက စိုးရိမ်စိတ်ကို အားတင်းကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာအောင် ကျင့်တယ်။ အနာဂတ်ကောင်းဖို့ကို ပဲ တွေးပြီး စိတ်ခိုင်အောင်နေတယ်။ ရေရှည်ကို တွက်ပြီး အားတင်းလာခဲ့ရတာပေါ့နော်။
ဂျပန်နိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးမှာ ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးတိုးတက်လာပါတယ်။
WF: လက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့် တက်ခဲ့တဲ့ ကောလိပ်က ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနော်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ဖြစ်ပုံလေး နှင့် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ရတဲ့အပိုင်းလေးကို ပြောပြပေးပါ။
ခင် : ဂျပန်-မြန်မာ ခရီးသွားလာရေးပိုင်းက အခုကနေစပြီး တွင်ကျယ်လာမယ်လို့မြင်တယ်။ ကောလိပ်ကျောင်း ရွေးတဲ့အချိန်တုန်းကလည်း ဂျပန်ကို ခရီးသွားလာရေး စတင်ကျယ်လာနေပြီးဆိုတော့ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းက အကျိုးအမျှော်ရှိတယ်ပေါ့နော်။
ကိုယ်ကိုတိုင်ကလည်း ခရီးသွားဝါသနာပါတော့ ရွေးချယ်လိုက်တာပါ။ ကောလိပ်က ၂နှစ်ခန့် သင်ရပါတယ်။ ကျောင်းပြီးခါနီးမှာ ကျောင်းကနေ အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုး မိတ်ဆက်ပါတယ်။
အဲ့ထဲမှာမှ အဆင်ပြေတဲ့ ခရီးသွားကုမ္ပဏီကို လျှောက်ထား၊ လူတွေ့အင်တာဗျူး ၃ဆင့်ဖြေပြီး အလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်စဝင်တာက ဒီနှစ် ၂၀၁၇ ၄လပိုင်းက ပါ။လက်တွေ့ ခရီးသွားကုမ္ပဏီမှာ တာဝန်ကျတဲ့နေရာကတော့ နာရီတာလေဆိပ် ဧည့်သည်ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ စကားပြောရတယ်။ ပြဿနာဖြေရှင်းပေးရတယ်။
တစ်ခါတလေ လေဆိပ်ကောင်တာမှာ အဆင်သင့်ရှိပေးရတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေကို ယဉ်ကျေးမှု မိတ်ဆက်ပေးရတယ် စသဖြင့်ပေါ့နော်။
အဓိက ဧည့်ခံပိုင်းစကားအသုံးအနှုန်း၊ ယဉ်ကျေးအသုံးအနှုန်းတွေ တိုးတက်လာတယ်။ ဂျပန်စကားပြောစွမ်းရည်လည်း တိုးတက်လာတယ်။
ဂျပန်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရာမှာ သူတို့က တိကျတယ်၊လုပ်ကိုင်မယ့် အစီအစဉ်ကို ကြိုတင်ဆွဲတယ်။
နောက်တစ်ခုက လေဆိပ်မှာလုပ်ရတဲ့အတွက် ဂျပန်ရုံးလိုမဟုတ်ဘဲ ပျော်ဖို့ကောင်း၊နိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရတယ်။
ကိုယ်ကိုတိုင်က ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ စကားပြောရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။
ဂျပန်ကသင်ခဲ့တဲ့ ပညာဖြင့် မြန်မာ-ဂျပန်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကို ထမ်းရွက်ချင်တဲ့ သူမ
WF : မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာက?
ခင် : နောက်ပိုင်းဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် ခရီးသွားကုမ္ပဏီဖွင့်နိုင်တဲ့အထိ ကြိုးစားမယ်။
အခုဆို မြန်မာဘက်ကနေ ဂျပန်ကို အလည်လာတာ နည်းပါးနေသေးတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးနည်းပါးတယ်ပေါ့နော်။ သွားလာရေး သတင်းမသိတာတွေလည်းရှိသလို သွားဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့အပိုင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားချင်တယ်။
လုပ်ငန်းဖွင့် ရင် မြန်မာကို အဓိက ။ ဂျပန်နေရာအနှံ့ သွားနိုင်အောင်ပေါ့နော်။
အခုလုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကလည်း မြန်မာမှာ ရုံးခွဲတစ်ခုရှိတယ်။ အများကြီး ဖွင့်စေချင်တယ်။
ဂျပန်တွေ နိုင်ငံခြားသားကို ခေါ်ယူအလုပ်ခန့်တယ်ဆိုတာက ဂျပန်နှင့်မတူတဲ့
နိုင်ငံခြားသားရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကို အသုံးချဖို့လို့ ထင်တာပဲ။
WF: ဂျပန်မှာ အလုပ်မဝင်ခင် သတိထားရတာတွေက
ခင် : အလုပ်မဝင်ခင်မှာ ကိုယ့်ဘက်က သေချာပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ ပညာအရည်အချင်းပိုင်း ( ဂျပန်စာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊တစ်ခြားစွမ်းရည်)
ကျွန်မဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာ TOIEC ဖြေတယ်။ အခြား အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲတွေ ဖြေဆိုတယ်။
国内旅行業務取扱管理者 ဂျပန်နိုင်ငံတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်
総合旅行業務取扱管理者 ဂျပန်ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်
နောက်ပိုင်း မှာ အင်္ဂလိပ်စာ ကြည့်လာတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေများလာတယ်။ သူတို့က နိုင်ငံခြားကို ထိုးဖောက်ချင်တဲ့အတွက် ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကြွယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံခြားသား၊ ကုမ္ပဏီက ချဲ့ထွင်မယ့်နိုင်ငံစကားပြောတတ်တဲ့ သူ စသဖြင့်
နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လို့သာ အလုပ်ခေါ်လာတယ်။ နိုင်ငံခြားသားက ဂျပန်ဆန်ဖို့ မလိုဘူး။ ဂျပန်နဲ့မတူတဲ့ အတွေးအခေါ်ပိုင်းကို အသုံးချသွားဖို့ လိုလာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပထိုးဖောက်ချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို လျှောက်ရင်ပေါ့နော်။
အဲ့တော့ ဂျပန်စာ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ စွမ်းရည်စသဖြင့် နေသွားရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။
လုံးဝ ဂျပန်ဆန်ရမယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ကောင်းတာရှိရင် အတုယူ၊ မကောင်းတာရှိရင်လည်း ဖယ်ရှားဖို့လို့ ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ရင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုက အရေးကြီးဆုံး
WF: ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်မှုဘဝကို ဘယ်လိုမြင်မိလဲ။
ခင် : အကုန် ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ ဂျပန်က နည်းနည်း အေးစက်စက်နိုင်တယ်။ သူများကို မစွက်ဖက်တတ်ဘူးပဲခေါ်မလား။ကိုဘ့်ဘာသာနေတယ်။
အဲ့အတွက်တော့ နေလို့ထိုင်လို့ အဆင်ပြေ ဘေးကင်းပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံသားမဆို နေလို့အဆင်ပြေတယ်။
ခင် : ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း ဂျပန်စာသင်ပြီး လမ်းတွေပွင့်လာတာကို မြင်လာတယ်။ လုပ်ချင်တာတွေ၊ လုပ်သင့်တာတွေ မြင်လာတယ်။ လုပ်ချင်တာကို အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။
နောင်လာမယ့် အစ်ကို၊အစ်မ၊ မောင်လေး၊ညီမလေးများလည်း ကိုယ့်ဘဝကိုယ်သေချာစဉ်းစား၊အနာဂတ်ကို တွေးပြီး ရှေ့ကို ရဲရဲကြီး ဆက်လိုက်ပါ လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အမည် 🍀🍀🍀 ခင်မြင့် လို့ ခေါ်ပါတယ်ရှင့်
အသက် 🍀🍀🍀 24နှစ် ပါ ( ၂၀၁၇ ခုနှစ် အင်တာဗျူးအချိန်)
ပညာအရည်အချင်း 🍀🍀🍀 +oberlin university,JTB travel &hotel college,N1, BA(Japanese) Mandalay University of Foreign Languages, 国内旅行業務取扱管理者,総合旅行業務取扱管理者
အလုပ် 🍀🍀🍀 Narita Airport ၊ ဧည့်သည်ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်း မှာ တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
ဂျပန်မှာ နေထိုင်တာ 🍀🍀🍀 ၄နှစ်ကျော်
နှစ်သက်သည့်အရာ 🍀🍀🍀 ခရီးသွားခြင်း
ပုံရိပ်　🍀🍀🍀　ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သူ
တိုကျိုမှာ အကြိုက်ဆုံးနေရာ 🍀🍀🍀 Takadanobaba
ဂျပန်ရဲ့အပြုအမူ 🍀🍀🍀 ဂျပန်တွေရဲ့ ကျိုးနွံမှု
အကြိုက်ဆုံး ဂျပန်စကား 🍀🍀🍀いつも元気だね　( ချီးမွမ်းတဲ့စကားလေးပေါ့နော်၊ ကြားရတာ ပီတီဖြစ်မိပါတယ်)
ဂျပန်မှာ စိတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေပြီး၊ လိုက်လျောညီထွေ နေနိုင်မှု အရေးကြီး ဆုံးပါလို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။
အဓိကကစိတ်ဓါတ်မကျဖို့ ဇွဲမလျှော့ဖို့နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ဖို့ပါပဲ။
ဒီတဈခေါကျရဲ့ ရှငျသနျခွငျးအနုပညာ အငျတာဗြူးအစီအစဉျမှာ ပါဝငျကူညီတငျဆကျပေးထားတာကတော့ ဂပြနျမှာ ၄နှဈကွာ နထေိုငျနတေဲ့ မခငျမွငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ယခုနှဈ ၂၀၁၇ခုနှဈမှာ ခရီးသှားလုပျငနျးတှငျ အလုပျစတငျဝငျရောကျလုပျကိုငျနပွေီး၊ ယခငျ၃နှဈတာကာလကတော့ တိုကြိုက ဂပြနျဘာသာစကားကြောငျးတကျရောကျပွီး၊ ခရီးသှားလာရေးနှငျ့ဟိုတယျလုပျငနျး ကောလိပျမှာ ၂နှဈခနျ့ပညာသငျကွားခဲ့သူပါ။
ဂပြနျက လုပျငနျးခှငျအတှအေ့ကွုံအပွငျ ကြောငျးတကျခဲ့တဲ့အခြိနျရဲ့ ဘဝကိုလညျး သိခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။
ဂပြနျမှာ လလေ့ာရသမြှကို ကိုယျပိုငျကုမ်ပဏီထောငျနိုငျတဲ့အထိ အသုံးခသြှားမယျ့ သူမရဲ့ ရှငျသနျခွငျး အနုပညာမှတျတမျး
ဂပြနျစရောကျတဲ့အခါ ဆကျဆံရေးပိုငျးကောငျးအောငျ ပွုမူနထေိုငျတယျ
WF : ဂပြနျကို ရောကျလာတဲ့အခါမှာ ဘာတှကွေုံတှခေဲ့လဲ။
ခငျ: ကြောငျးတကျရငျးနဲ့အလုပျလုပျရတာကတော့ အစပိုငျးမှာ ပငျပနျးတယျ။ အသားမကဘြူး။
ကိုယျကရောကျတာ မကွာသေးတော့ ဘေးလူတှလေုပျပုံကို လိုကျကွညျ့တယျ။ ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ စကားလှမျးပွောတယျ။ စိတျပါလကျပါနဲ့ နှုတျဆကျတယျ။အဲ့အတှကျကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ ပုံရိပျက တကျလာတာပေါ့နျော။ အမွဲပြျောပြျောနတေော့ ဂပြနျတှနေဲ့ပွောဆိုရာမှာလညျး ၊ တခွားနိုငျငံသားတှနှေငျ့ ပွောရာမှာလညျး အဆငျပွခေဲ့ပါတယျ။
အခြိနျပိုငျးအလုပျကနေ ကိုယျ့ရဲ့အပွောအဆိုတှေ၊လူမူဆကျဆံရေးပိုငျး အရမျးအထောကျအကူပွုတယျ။
ကိုယျကိုတိုငျကလညျး စကားပွောရတာကွိုကျတယျလေ။ အဆငျပွသှေားတာပေါ့။
နောကျတဈခု ပညာရလိုကျတာတော့ ရှိတယျ။ အဲ့တာက အခြိနျပိုငျးအလုပျဝငျရငျးနဲ့ တဈခါတုနျးကတော့ ကွုံခဲ့ဖူးတယျ။ စနေ၊ တနင်ျဂနှေ ၂ရကျပဲ ဝငျတဲ့ အလုပျပါ။ စစပိုငျးဆိုတော့ နားမလညျတာအမြားကွီးပဲ။ ဂပြနျတှကေလညျး တိကတြယျ။ ပွောစရာရှိ ပွောတာပဲ။သူ့က ဘာလို့ကိုယျ့ကို အဲ့လိုပွောတာလဲ။ ငါလညျး ကွိုးစားနတောပဲလေ ဆိုပွီး ပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျကိုကိုယျ ဘာလိုနလေညျးဆိုတာ ပွနျစဉျးစားကွညျ့တယျ။ ပွနျသုံးသပျတယျ။ ကိုယျလညျး ပွငျစရာရှိတာ ပွငျရမယျ။
အဲ့မှာ ပညာရလိုကျတာက တဈခုခုဆို စိတျအရမျးမထိခိုကျအောငျ တှေးချေါနထေိုငျဖို့ပဲ။ အားမလြော့ဖို့ဘဲ။ စိတျထဲမထားဘဲ ရှဆေ့ကျဖို့ပေါ့နျော။
ဒါပမေယျ့ လူဆိုတော့လညျး စိတျထဲထားမိတာတှတေော့ ရှိတာပေါ့။ စိတျပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိနဖေို့က အရေးကွီးတယျလို့ ထငျတယျ။စိတျပြော့နရေငျ ဘာမှ မလုပျနိုငျဘူး။ ပြျောပြျောနတေယျ။ မိသားစု၊သူငယျခငျြးတှနှေငျ့ အမွဲအဆကျအသှယျလုပျတယျ။
အခကျအခဲတှရှေိရငျ ရငျဖှငျ့တယျ။တိုငျပငျတယျ။ဆှေးနှေးတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျ ဖွတျသနျးနိုငျပါတယျ။
လူမူဆကျဆံရေးကောငျးရငျ အဆငျပွတေယျလို့ ခံယူထားပါတယျ။
ဂပြနျဘာသာစကားသငျရာကနေ အခှငျ့အရေးလကျလှတျမခံဘဲ ဂပြနျထိရောကျအောငျ ကွိုးစားခဲ့တဲ့သူမ
WF : ဂပြနျလာဖွဈတဲ့အကွောငျးအရငျးလေး ပွောပွပေးပါ။
ခငျ : အမှနျအတိုငျးအပွောရရငျ ဂပြနျမှ ဂပြနျသှားရမယျဆိုပွီး ရူးသှပျခဲ့တာမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့အနာဂတျက ကိုယျကိုယျတိုငျဆုံးဖွတျရမှာဆိုတော့လညျး တက်ကသိုလျတကျနစေဉျကတညျးက အမြိုးမြိုးစဉျးစားတာပေါ့။တက်ကသိုလျမှာက ဂပြနျဘာသာမဂြောယူထားတာပေါ့နျော။ ဂပြနျဘာသာအပွငျ တရုတျကြောငျး၊ အင်ျဂလိပျစာ၊ LCCI၊computer တှလေညျး လုပျဖွဈပါတယျ။ ကြောငျးပွီးရငျ စဉျးစားထားတာက ပွညျပနိုငျငံတဈနိုငျငံမှာ ပညာဆကျသငျမယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ဘဝလမျးကွောငျးကို ဆကျလကျ ပွုပွငျမယျပေါ့။ ကြောငျးပွီးသှားတော့ စဉျးစားလိုကျတာက ဂပြနျစာကို ဘှဲ့ရတဲ့အထိ သငျယူပွီးပွီ။ ဂပြနျမှာ ဆကျလကျပညာသငျဖို့လညျး ဂပြနျစာ၊ယဉျကြေးမှုပိုငျး သိနတေော့ မခကျခဲလောကျဘူးပေါ့။ အတှအေ့ကွုံပိုငျး၊ဗဟုသုတပိုငျး လိုခငျြခဲ့တာပါ။ရညျမှနျးခကျြကွီးကွီးမားမားတော့ မရှိခဲ့ဘူး။ငယျရှယျတုနျးမှာ တကျနိုငျသလောကျ ပညာစုခငျြတယျပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ဂပြနျရောကျလာခဲ့တာပါ။
ဂပြနျရောကျရှိတာ ၂၀၁၃ကဆိုတော့ မကွာခငျ ၅နှဈထဲပါ။ဂပြနျဘာသာသငျတနျးကြောငျးကိုပဲ အရငျတကျရောကျပညာသငျပါတယျ။ကြှနျမတော့ ဂပြနျကို ရှေးခဲ့တာ မှနျကနျတဲ့ ရှေးခယျြမှုလို့ပဲထငျတယျ။ တျောတျောမြားမြား ပညာရတယျ။
တဈခြို့ကတော့ပွောတယျ။ ဂပြနျစာနှငျ့ ကြောငျးပွီးတာကို ဂပြနျမှာ စကားသငျတနျးကြောငျးဆကျတကျတော့ နှမြှောစရာကွီးတဲ့။ တိုကျရိုကျတက်ကသိုလျ၊ ကောလိပျခြိတျလညျး ရတာပဲပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျတိုငျက ဂပြနျလူနမှေုပိုငျး နားမလညျတော့ အရငျဆုံး ကငျြ့သားရအောငျနဲ့ သတငျးအခကျြအလကျရှာဖှလေို့ရအောငျ အခြိနျယူလိုကျတာပါ။
တဈယောကျတညျးလာခဲ့ရတဲ့ အခြိနျတုနျးကတော့ တှဝေတေယျ။ ကွောကျတယျ။
တကယျ့ဂပြနျရဲ့ နထေိုငျမှုအပိုငျးက ဘယျလိုလဲ သတငျးအခကျြအလကျဘာမှ မသိဘူးလေ။
ဂပြနျလူမြိုးတှနေဲ့ဆကျဆံရေးပိုငျး( ဂပြနျမှာ ခှဲခွားဆကျဆံခံရတာတှေ ရှိတယျလို့ ကွားဖူးတော့ ကွောကျမိတာပဲ)
ဂပြနျအစားအစာ (အသားစိမျးငါးစိမျး၊ရညှေိတှေ) စားနိုငျပါ့လား။
ကြောငျးတကျရမှာဆိုတော့ စားရိတျက အဆငျပွပေါ့မလား။
လုပျနိုငျပါ့မလား ဆိုပွီးစိုးရိမျခဲ့တယျ။ အမြိုးမြိုးပေါ့။
အဓိက စိုးရိမျစိတျကို အားတငျးကြျောဖွတျခဲ့တယျ။ စိတျဓါတျခိုငျမာအောငျ ကငျြ့တယျ။ အနာဂတျကောငျးဖို့ကို ပဲ တှေးပွီး စိတျခိုငျအောငျနတေယျ။ ရရှေညျကို တှကျပွီး အားတငျးလာခဲ့ရတာပေါ့နျော။
ဂပြနျနိုငျငံ ခရီးသှားလုပျငနျးကုမ်ပဏီကွီးမှာ ဝငျရောကျအလုပျလုပျကိုငျနပွေီး စှမျးရညျအမြိုးမြိုးတိုးတကျလာပါတယျ။
WF: လကျရှိအလုပျအကိုငျနှငျ့ တကျခဲ့တဲ့ ကောလိပျက ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလုပျငနျးနျော။ခရီးသှားလုပျငနျးကို ရှေးခယျြဖွဈပုံလေး နှငျ့ တာဝနျယူလုပျကိုငျရတဲ့အပိုငျးလေးကို ပွောပွပေးပါ။
ခငျ : ဂပြနျ-မွနျမာ ခရီးသှားလာရေးပိုငျးက အခုကနစေပွီး တှငျကယျြလာမယျလို့မွငျတယျ။ ကောလိပျကြောငျး ရှေးတဲ့အခြိနျတုနျးကလညျး ဂပြနျကို ခရီးသှားလာရေး စတငျကယျြလာနပွေီးဆိုတော့ ခရီးသှားလာရေးလုပျငနျးက အကြိုးအမြှျောရှိတယျပေါ့နျော။
ကိုယျကိုတိုငျကလညျး ခရီးသှားဝါသနာပါတော့ ရှေးခယျြလိုကျတာပါ။ ကောလိပျက ၂နှဈခနျ့ သငျရပါတယျ။ ကြောငျးပွီးခါနီးမှာ ကြောငျးကနေ အလုပျအကိုငျအမြိုးမြိုး မိတျဆကျပါတယျ။
အဲ့ထဲမှာမှ အဆငျပွတေဲ့ ခရီးသှားကုမ်ပဏီကို လြှောကျထား၊ လူတှအေ့ငျတာဗြူး ၃ဆငျ့ဖွပွေီး အလုပျရခဲ့ပါတယျ။ အလုပျစဝငျတာက ဒီနှဈ ၂၀၁၇ ၄လပိုငျးက ပါ။လကျတှေ့ ခရီးသှားကုမ်ပဏီမှာ တာဝနျကတြဲ့နရောကတော့ နာရီတာလဆေိပျ ဧညျ့သညျဝနျဆောငျမှုအပိုငျး ဖွဈပါတယျ။ ဧညျ့သညျတှနှေငျ့ တိုကျရိုကျထိတှေ့ စကားပွောရတယျ။ ပွဿနာဖွရှေငျးပေးရတယျ။
တဈခါတလေ လဆေိပျကောငျတာမှာ အဆငျသငျ့ရှိပေးရတယျ။
နိုငျငံခွားသားတှကေို ယဉျကြေးမှု မိတျဆကျပေးရတယျ စသဖွငျ့ပေါ့နျော။
အဓိက ဧညျ့ခံပိုငျးစကားအသုံးအနှုနျး၊ ယဉျကြေးအသုံးအနှုနျးတှေ တိုးတကျလာတယျ။ ဂပြနျစကားပွောစှမျးရညျလညျး တိုးတကျလာတယျ။
ဂပြနျလုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ အလုပျလုပျရာမှာ သူတို့က တိကတြယျ၊လုပျကိုငျမယျ့ အစီအစဉျကို ကွိုတငျဆှဲတယျ။
နောကျတဈခုက လဆေိပျမှာလုပျရတဲ့အတှကျ ဂပြနျရုံးလိုမဟုတျဘဲ ပြျောဖို့ကောငျး၊နိုငျငံပေါငျးစုံကလူတှနှေငျ့ ပွောဆိုဆကျဆံရတယျ။
ကိုယျကိုတိုငျက ရယျရယျမောမောနဲ့ စကားပွောရတာ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့အတှကျ အဆငျပွသှေားတာပေါ့။
ဂပြနျကသငျခဲ့တဲ့ ပညာဖွငျ့ မွနျမာ-ဂပြနျခရီးသှားလုပျငနျးရဲ့ တဈထောငျ့တဈနရောကို ထမျးရှကျခငျြတဲ့ သူမ
WF : မြှျောလငျ့ထားတဲ့အရာက?
ခငျ : နောကျပိုငျးဆိုရငျ ကိုယျပိုငျ ခရီးသှားကုမ်ပဏီဖှငျ့နိုငျတဲ့အထိ ကွိုးစားမယျ။
အခုဆို မွနျမာဘကျကနေ ဂပြနျကို အလညျလာတာ နညျးပါးနသေေးတယျ။နိုငျငံခွားခရီးနညျးပါးတယျပေါ့နျော။ သှားလာရေး သတငျးမသိတာတှလေညျးရှိသလို သှားဖို့ အခကျအခဲတှေ ရှိမယျထငျပါတယျ။ အဲ့အပိုငျးကို မှနျမှနျကနျကနျ ဝနျဆောငျမှု ပေးသှားခငျြတယျ။
လုပျငနျးဖှငျ့ ရငျ မွနျမာကို အဓိက ။ ဂပြနျနရောအနှံ့ သှားနိုငျအောငျပေါ့နျော။
ဖွဈနိုငျရငျ ဂပြနျမှာ ရှိနတေုနျး မွနျမာအခငျြးခငျြး ခရီးသှားလေးလညျး စီစဉျခငျြတယျ။
အခုလုပျနတေဲ့ ကုမ်ပဏီကလညျး မွနျမာမှာ ရုံးခှဲတဈခုရှိတယျ။ အမြားကွီး ဖှငျ့စခေငျြတယျ။
ဂပြနျတှေ နိုငျငံခွားသားကို ချေါယူအလုပျခနျ့တယျဆိုတာက ဂပြနျနှငျ့မတူတဲ့
နိုငျငံခွားသားရဲ့အတှေးအချေါတှကေို အသုံးခဖြို့လို့ ထငျတာပဲ။
WF: ဂပြနျမှာ အလုပျမဝငျခငျ သတိထားရတာတှကေ
ခငျ : အလုပျမဝငျခငျမှာ ကိုယျ့ဘကျက သခြောပွငျဆငျထားရပါမယျ။ ပညာအရညျအခငျြးပိုငျး ( ဂပြနျစာ၊ အင်ျဂလိပျစာ၊တဈခွားစှမျးရညျ)
ကြှနျမဆိုရငျ အင်ျဂလိပျစာ TOIEC ဖွတေယျ။ အခွား အရညျအခငျြးစဈစာမေးပှဲတှေ ဖွဆေိုတယျ။
国内旅行業務取扱管理者 ဂပြနျနိုငျငံတှငျး ခရီးသှားလုပျငနျးလုပျကိုငျနိုငျခှငျ့
総合旅行業務取扱管理者 ဂပြနျပွညျတှငျးပွညျပ ခရီးသှားလုပျငနျးလုပျကိုငျနိုငျခှငျ့
နောကျပိုငျး မှာ အင်ျဂလိပျစာ ကွညျ့လာတဲ့ ကုမ်ပဏီတှမြေားလာတယျ။ သူတို့က နိုငျငံခွားကို ထိုးဖောကျခငျြတဲ့အတှကျ ဘာသာစကားစှမျးရညျကွှယျဝတဲ့ နိုငျငံခွားသား၊ ကုမ်ပဏီက ခြဲ့ထှငျမယျ့နိုငျငံစကားပွောတတျတဲ့ သူ စသဖွငျ့
နိုငျငံခွားသားဖွဈလို့သာ အလုပျချေါလာတယျ။ နိုငျငံခွားသားက ဂပြနျဆနျဖို့ မလိုဘူး။ ဂပြနျနဲ့မတူတဲ့ အတှေးအချေါပိုငျးကို အသုံးခသြှားဖို့ လိုလာတယျလို့ ထငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ပွညျပထိုးဖောကျခငျြတဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေို လြှောကျရငျပေါ့နျော။
အဲ့တော့ ဂပြနျစာ တဈခုတညျးမဟုတျဘဲ၊ ကိုယျ့ရဲ့ ပငျကိုယျစှမျးရညျ၊ ကိုယျ့နိုငျငံရဲ့ စှမျးရညျစသဖွငျ့ နသှေားရငျ အဆငျပွမေယျထငျတယျ။
လုံးဝ ဂပြနျဆနျရမယျဆိုတာ မဟုတျဘူး။ကောငျးတာရှိရငျ အတုယူ၊ မကောငျးတာရှိရငျလညျး ဖယျရှားဖို့လို့ ထငျပါတယျ။
ဂပြနျမှာ အလုပျလုပျရငျ လိုကျလြောညီထှရှေိမှုက အရေးကွီးဆုံး
WF: ဂပြနျနိုငျငံမှာ နထေိုငျမှုဘဝကို ဘယျလိုမွငျမိလဲ။
ခငျ : အကုနျ ကောငျးတယျ။ဒါပမေဲ့ ဂပြနျက နညျးနညျး အေးစကျစကျနိုငျတယျ။ သူမြားကို မစှကျဖကျတတျဘူးပဲချေါမလား။ကိုဘျ့ဘာသာနတေယျ။
အဲ့အတှကျတော့ နလေို့ထိုငျလို့ အဆငျပွေ ဘေးကငျးပါတယျ။ဘယျနိုငျငံသားမဆို နလေို့အဆငျပွတေယျ။
ခငျ : ကိုယျကိုတိုငျလညျး ဂပြနျစာသငျပွီး လမျးတှပှေငျ့လာတာကို မွငျလာတယျ။ လုပျခငျြတာတှေ၊ လုပျသငျ့တာတှေ မွငျလာတယျ။ လုပျခငျြတာကို အာရုံစိုကျပွီးလုပျတာအကောငျးဆုံးပဲ။
နောငျလာမယျ့ အဈကို၊အဈမ၊ မောငျလေး၊ညီမလေးမြားလညျး ကိုယျ့ဘဝကိုယျသခြောစဉျးစား၊အနာဂတျကို တှေးပွီး ရှကေို့ ရဲရဲကွီး ဆကျလိုကျပါ လို့ ပွောခငျြပါတယျ။
အမညျ 🍀🍀🍀. ခငျမွငျ့ လို့ ချေါပါတယျရှငျ့
အသကျ 🍀🍀🍀 24နှဈ ပါ ( ၂၀၁၇ ခုနှဈ အငျတာဗြူးအခြိနျ)
ပညာအရညျအခငျြး 🍀🍀🍀+oberlin university,JTB travel &hotel college ,N1, BA(Japanese) Mandalay University of Foreign Languages, 国内旅行業務取扱管理者,総合旅行業務取扱管理者
အလုပျ 🍀🍀🍀 Narita Airport ၊ ဧညျ့သညျဝနျဆောငျမှုအပိုငျး မှာ တာဝနျယူလုပျကိုငျနပေါတယျ။
ဂပြနျမှာ နထေိုငျတာ 🍀🍀🍀 ၄နှဈကြျော
နှဈသကျသညျ့အရာ 🍀🍀🍀 ခရီးသှားခွငျး
ပုံရိပျ　🍀🍀🍀　ပြျောပြျောရှငျရှငျနတေတျသူ
တိုကြိုမှာ အကွိုကျဆုံးနရော 🍀🍀🍀 Takadanobaba
ဂပြနျရဲ့အပွုအမူ 🍀🍀🍀.　ဂပြနျတှရေဲ့ ကြိုးနှံမှု
အကွိုကျဆုံး ဂပြနျစကား 🍀🍀🍀 いつも元気だね　( ခြီးမှမျးတဲ့စကားလေးပေါ့နျော၊ ကွားရတာ ပီတီဖွဈမိပါတယျ)
ဂပြနျမှာ စိတျပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဆကျဆံရေးအဆငျပွပွေီး၊ လိုကျလြောညီထှေ နနေိုငျမှု အရေးကွီးဆုံးပါလို့ တိုကျတှနျးပွောဆိုထားပါတယျ။
အဓိကကစိတျဓါတျမကဖြို့ ဇှဲမလြှော့ဖို့နဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျနတေတျဖို့ပါပဲ။
Previous Previous post: သိထားသင့်သော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အလုပ်ဥပဒေတစ်ချို့
Next Next post: သူများနှင့်မတူ တစ်မူထူးခြားတဲ့ ဂျပန်ခရစ်စမတ် Big Event